Vaovao - Ny milina fanaovan-gazety Bush Automatique izay baikoin'ny mpanjifa karana eto an-toerana dia nahavita ny asa ampanaovina fitaovana
Ny milina fanaovan-gazety Bush Automatique baikoin'ny mpanjifa karana eny an-toerana dia nahavita ny asa fampanaovina fitaovana
Ny mpanjifa karana dia nividy milina fanaovan-gazety Bush Automatic Press. Ny injenieranay dia nankany India mba hahalala ny fametrahana fitaovana. Malalaka be ny fizotry ny fametrahana ary tsara ny kalitaon'ny famokarana fitaovana.
Milamina ny fizotry ny asa vaomiera ary mandeha tsara ny fitaovana mandritra ny fotoam-pitsarana. Ny orinasanay koa dia nanolotra ho an'ny mpanjifa akora simika voajanahary ho fanandramana, fitsitsiana ireo mpanjifa fako tsy ilaina mandritra ny fizahan-toetra. Ireo injenieranay dia manome torolàlana sy fanofanana ho an'ireo mpiasa teknikan'ny mpanjifa ary tena afa-po amin'ny serivisinay ny mpanjifa.
Manana karazana milina famolavolana mandeha ho azy isika telo. Afaka mamorona ireto masontsivana manaraka ireto: 1, gasket: savaivony ivelany avo indrindra 70Mm, hatevin'ny 7mm, 1500 / ora.2, gasket lehibe: savaivony ivelany 350mm lehibe indrindra, hatevin'ny 10mm, 400-900 / ora.3, fantsom-boaloboka / tsoraka: savaivony ivelany farany 110mm, lava 110mm. 200-400 / ora.
Fotoana fandefasana: Apr-28-2017